Wariye | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL Wariye – Page 3 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home Posts by Sool
Ciidamada Puntland oo fashiliyey weerar culus oo lagu qaaday & Fadhiisimo ku yaalay jiidaha hore oo….
BOSASO(P-TIMES)- Ciidamada Puntland ee PSF ayaa hawlgal ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan Buuraha Cal Madow ee gobolka Bari, waxaana ay sheegeen in hawlgalkaasi ay uga hortageen weerar kaga yimid dhinaca ururka Al-shabaab ee ku sugan Buuraha Cal Madow gaar ahaan Buuraleyda Warbad iyo Gebidheer isla markaasna ay fashiliyeen weeraradaasi. Sidoo kale dowladda Puntland ayaa sheegtay...
DHAGAYSO:Deegaano hoostaga Garowe oo arin cusub kasoo korodhay & Baaq loo diray madaxweyne Denni
GAROWE(P-TIMES)- Iyadoo weli laga dareemayo deegaano badan oo ka tirsan gayiga Soomaaliyeed abaartii ka dhacday dalka Soomaaliya ayaa waxaa deegaano hoostaga magaalada Garowe ee caasimada Puntland laga soo sheegayaa cabashooyin ku aadan abaartaasi iyo qaar kamid ah hay’addaha Samafalka oo joojiyey deeqo raashin ah oo la siin jiray dadka reer guuraaga ah ee abaartu ay saamaysay. HALKAN HOOSE KA...
DAAWO:Madaxweyne Denni oo cadaadis xoogan soo fuulay & Musharaxiintii la tartamaysay oo ku dhawaaqay in ay….
GAROWE(P-TIMES)- Xili maanta la ansixiyey gollaha wasiirada cusub ee Puntland ayaa waxaa dhismaha xukuumadda madaxweyne Denni iyo gollihiisa waxaa ka hor yimid qaar kamid ah musharaxiint u taagnaa xilka madaxtinimada Puntland, kuwaas oo dhaliilo kala duwan warbaahinta u mariyey madaxweynaha.
DEG DEG:Dowladda Kenya oo ku dhawaaqday in ay xiriirka u jartay Dowladda Federaalka Somalia
NAIROBI(P-TIMES)- Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay xiriirka u jartay dowladda Soomaaliya kadib muran ka dhashay dhul badeedka labadda dal ay ku muransan yihiin. Dowladda Kenya ayaa ku amartay Safiirkeeda Soomaaliya in uu si deg deg ah uga soo baxo dalka Soomaaliya,iyada oo sidoo kalena dowladda Kenya ay amartay Safiirka Soomaaliya u jooga Kenya in uu dhaqso kaga baxo dalkaas. Kenya ayaa arrintaan...
Maraykanka oo shaaciyey lacag cusub oo lagu talo galay dhaqaalaha Somalia
NAIROBI(P-TIMES)- Dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday lacag dhan 74 milyan oo dollar oo cusub oo lagu taageerayo kobaca dhaqaalaha Soomaaliya. Qoraal kasoo baxay howlgalka Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri “Dowladda Maraykanka waxay ku faraxsan tahay inay taageerto dadka iyo dowladda Soomaaliya ayaga oo raadinaya inay abuuraan mustaqbal wanaagsan, oo ay ku jirto horumar dhaqaale iyo shaqo...
DHAGAYSO:Magaalada Gaalkacyo oo cabasho ay kasoo yeedhay & Darawalada Mooto Bajaajyada oo sheegay in ay….
GAROWE(P-TIMES)- Darawalada Mooto Bajaajyada ee magaalada Gaalkacyo ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhibaatooyin ay sheegeen in ay ku qabaan gaadiidka waa weyn ee isticmaala wadooyinka Gaalkacyo qaarkood, iyagoona sheegay in aysan helin xuquuqdooda xiliyada ay la kulmaan shilalka. HALKAN HOOSE KA DHAGAYSO CODADKA http://puntlandtimes.ca/wp-content/uploads/2019/02/wadayaasha-moota-bajajta-magalada-glkacayo-oo-cabasho-ka-mujiyay-dhibatooyinka-mararka-kulmaan-shacanka-.mp3 Laamiyada...
Baarlamaanka Puntland oo codka kalsoonida ah siiyey xukuumadda madaxweyne Denni
GAROWE(P-TIMES)- Xildhibaannada gollaha wakiilada dowladda Puntland ayaa cod gacan taag ah ku ansixiyey xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni. 63 xildhibaan oo fadhiyey kulanka maanta ayaa dhammaantood si wadar ah codka kalsoonida u siiyey xukuumadda cusub ee la horkeenay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha Baarlamanka Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed). Gollaha...
DHAGAYSO:Wariye banaanka keenay siraha ka dambeeya jaah wareerka soo wajaha xili walba Puntland & Wasiirada Denni oo qaarkood lagu dhagan yahay “Dabaqyo dhaa dheer & Gaadiid qaali ah oo la gato miyaa dalkii loo bur burinayaa”
GAROWE(P-TIMES)- Waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa dhagaysatayaal barnaamij gaar ah oo daaha lagaga qaaday siraha ka dambeeya jaah wareerka soo wajaha xili walba dowladda Puntland, xalku sida uu ku jiro iyo eedaymo loo jeediyey qaar kamid ah wasiirada Puntland. HALKAN HOOSE KA DHAGAYSO CODKA http://puntlandtimes.ca/wp-content/uploads/2019/02/Xaalada-Puntland1.mp3
DHAGAYSO:Madaxweyne Denni oo Garowe kaga dhawaaqay war gil gilay Somaliland & Kooxaha Argagaxisadaha ee Daacish Iyo Al-shabaab “Sool, Sanaag Iyo Cayn waxaan u samayn doonaa….
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni oo khudbad ka hor jeedinayey gollaha wakiilada Puntland oo uu horkeenay maanta xukuumaddiisa cusub ee uu dhawaan soo dhisay si uu u waydiisto codka kalsoonida ayaa ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah. Madaxweynaha ayaa ka dalbaday xildhibaannada Baarlamanka in ay siiyaan codka kalsoonida gollaha wasiirada cusub si uu u hirgeliyo ballanqaadyadiisii,...
Ethiopia & Jabuuti oo kala saxiixday heshiis ku saabsan Shidaalka laga helay dhulka Soomaalida
JIGJIGA(P-TIMES)- Dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia ayaa heshiis kala saxiixday, kaas oo ku saleysan Shidaalka laga soo saarayo deegaanka ismaamulka Soomaalida. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in heshiiskaasi uu ku kacayo dhaqaalo gaaraya 3.2 Bilyan oo Dollar, waxaana uu dhigayaa in shidaalka Ethiopia kasoo saarto dhulka Ismaamulka Soomaalida laga dhoofiyo dalka Jabuuti. Heshiiska labada dowladood...
LIVE U DAAWO:Gollaha wasiirada Puntland oo hada la ansixinayo & Khudbado ka socda xarunta Baarlamaanka
GAROWE(P-TIMES)- Waxaa haatan ka socda xarunta Baarlamaanka Puntland khudbadaha ay jeedinayaan wasiirada cusub ee dowladda Puntland oo madaxweyne Denni soo magacaabay 10-kii bishani, kadib la tashiyo kala duwan oo uu sameeyey. Khudbadahani ayaa wasiiradu diirada ku saarayaan waxqabadkooda dambe iyo taariikh nololeedkooda, waxaana khudbada kadib ay xildhibaanadu meel marin doonaan wasiiradani oo dhan...
DHAGAYSO:Dowladda Somalia oo guushii ugu weynayd gaadhay & Ciidamada AMISOM oo laga saarayo qaybo kamid ah dalka kadib markii….
MUQDISHO(P-TIMES)- Waxaa saaka ku wajahan deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Somalia si ay badal ugu noqdaan ciidanka AMISOM oo maalmo ka hor la shaaciyey in ay ka baxayaan qaybo kamid ah koonfurta Somalia. HALKAN HOOSE KA DHAGAYSO CODKA http://puntlandtimes.ca/wp-content/uploads/2019/02/warbixinta-codka-AMISOM.mp3
IGAD oo talaabo lagu farxay ku dhawaaqday & Dayntii lagu lahaa Somalia oo….
NAIROBI(P-TIMES)- Xoghayaha Guud ee Urur-gobaleedka IGAD Maxbuub Macallim ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan Baaqaasi iyo in Somalia laga cafiyo Daymaha Caalamka, wuxuuna xusay in baab’inta daymahaasi ay hagaajin karto nolosha dadka Soomaalida oo iyagu dhibaatooyin kala kulmay colaadihii iyo burburkii ay horey u soo mareen 30-kii sanno ee la soo dhaafay. Hadal-qoraal oo uu soo saaray ayuu ku sheegay...
Mucjiso la yaab leh oo ka dhacday dal kamid ah Carabta & Haweeney hal mar ah wada dhashay 7 caruur oo…
NAIROBI(P-TIMES)- Haweeney u dhalatay dalka Iraq oo 25-jir ah ayaa la sheegay inay hal mar dhashay 6 gabddhood iyo wiil, sida ay shaaciyeen Dhakhaatiirta dalkaasi oo sheegay inay tahay markii ugu horreysay Taariikhda Iraq inay haweeney dhasho 7 mataano. Haweeneydaasi oo aan magaceeda la shaacin waxay mataanayaashaasi si caadi ah ugu dhashay Isbitaalka Al-batoul oo ku yaalla Gobalka Diyaala. Afhayeenka...
DAAWO:Deegaano ka tirsan gobolka Sool oo war cusub kasoo kordhay & Madax Puntland ah oo….
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Deegaamo katirsan gobolka Sool ayaa waxaa lagu qabtay munaasabdo lagu taageerayey golaha cusub ee wasiirada dowladda Puntland ayna shacabku ku muujinayeen inay kamid yihiin Puntland.
Xiliga la furi doono Hotelkii Nairobi ee Al-shabaab ay weerartay oo la shaaciyey
Wargeyska The Star ayaa qoray in Hoteelkaasi dib loo furi doono bisha June ee sannadkan, kadib, markii ay Alshabaab weerar iyo qaraxyo ku ekeysiiyeen bishii la soo dhaafay ee Janaayo 15-da. Weerarkaasi waxaa lagu dilay 21 qof oo 6 ka mid ahaayeen Shaqaale iyo Ilaalo dhinaca Ammaanka ee Hoteel Dusit D2. Maareeyaha Guud ee Hoteelkaasi, Misheel Metakas waxa uu maanta shaaciyey inay u diyaar garoobeen...
DAAWO:C/raxmaan C/shukuur oo ka hadlay arimo xasaasi ah & Farmaajo oo uu weeraray
GAROWE(P-TIMES)- Siyaasi C/raxmaan C/shakuur oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee sida weyn u dhaliilsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay arimo badan oo xasaasi ah, waxaana kulan ka dhacay Garowe uu kaga hadlay waxyaabaha looga baahan yahay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA
DAAWO:Madaxweyne Gaas oo Garowe kaga dhawaaqay war culus & Fariin la yaab leh oo uu u reebay…..
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo marwadiisa Drs. Hodon Siciid ayaa saaka ka dhoofay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Madaxweyne Gaas oo warbaahinta kula hadlay qolka martida ee madaarka diyaaradaha General Maxaemd Abshir ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka reer Puntland inay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarka xukuumadda cusubna garab...
DEG DEG:Qarax ismiidaamin ah oo goor dhoweyd ka dhacay Baardheere
MUQDISHO(P-TIMES)- Qarax Ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa goor dhowey ka dhacay degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa loo adeegsaday gaari Nooho ah waxaana lagu dhuftay difaaca bar Kontorol oo ay ciidamada Itoobiya ku lahaayeen banaanka degmada Baardheere. Saraakiil ka tirsan Milateriga Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka war...
Biya xireen kusoo dumay dalka Brazil oo sababay dhimashada boqolaal qof
WASHINGTON(P-TIMES)- Sawiro naxdil leh oo la helay ayaa muujinaya biya xireen kusoo dumay koonfurta waddanka Brazil kaasi oo ku fatahay goob macdanta laga qodo, waxaana ku dhintay ama lagu la’yahay in ka badan saddex boqol oo qof. Sawirada oo ay duubeen kaamirada qarsoon ee CCTV ayaa muujinaya daqiiqadi biya xireenku kusoo dumay maqaayad kofeega laga cabo oo ku dhex taalay shirkada macdanta iyo...